Ụlọ Ikpe Agbasaa Ikpe Megidere Ihedioha
Ụlọ Ikpe ukwu dị na Owerri, nọrọ ụbọchị Fụraịdee gbasaa ikpe ahụ nke Sinetọ Sam Anyanwụ na-anọchite anya ndị ọwụwa anyanwụ Imo n'ụlọ Ome Iwu ala anyị nke o ji ama nhọpụta Emeka Ihedioha dịka onye ga-azọ ọkwa gọvanọ n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party na Steeti ahụ.
Anyanwụ rịọrịọ ụlọ ikpe ahụ ka ha kagbuo mmeri Ihedioha ma kpọọ ya dịka onye meriri na nhọpụta nke onye ga-azọ gọvanọ na ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ. Ọ sịrị na Ihedioha jiri wuruwuru were nweta mmeri na nhọpụta nke ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ.
Dịka ọ na-ekpe ikpe, Ọkaikpe Tijani Ringin kwuru na onye mkpesa (Anyanwụ) enweghị ike kọwara ụlọ ikpe ahụ ihe mere ha ga-eji were nye ya arịrịọ ya.
Oge ndị PDP mere nhọpụta ha na Owere, Ihedioha nwetara vootu dị otu puku, narị asaa na iri abụọ na atọ (1,723) nke mere o jiri bụrụ onye pụtara dịka onye ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ họpụtara ga-azọ ọkwa gọvanọ na ntụliaka ahụ emere na abalị iteghete nke ọnwa Maachị. Anyanwụ, n'aka nke ọzọ nwetara vootu dị otú puku, narị abụọ na iri asatọ na abụọ (1,282) were bụrụ onye nke abụọ.
Ebe Anyanwụ anabataghị mpụtara ntụliaka nke nhọpụta ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ, ndị ọzọ so zọọ ya bụ ọkwa dịka Sinetọ Athan Achọnụ, Ọkammụta Jude Njọkụ, Chukwu Ekomaru na George Ejike, kelere Ihedioha na mmeri ya dịka onye ga-azọ gọvanọ steeti ahụ n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ na Steeti ahụ.